10 यूरोपमा सबैभन्दा सुन्दर तटीय शहरहरू | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > 10 यूरोपमा सबैभन्दा सुन्दर तटीय शहरहरू
पढ्ने समय:6मिनेट(Last Updated On: 15/01/2021)
एकातिर एट्लान्टिक महासागर र अर्कोमा सब भन्दा सुन्दर शहरहरू, को 10 युरोपका सबै सुन्दर तटीय शहरहरू आराम र अविस्मरणीय बिदाका लागि उत्तम गन्तव्यहरू हुन्. चट्टानहरूमा आराम गर्दै, सागर छालहरु सुन्दै, पुरानो समुद्री पानीमा भिज्दै, वा पोर्ट र टावर पछाडिका किंवदन्ती पत्ता लगाउँदै, विशेष अनुभवहरू हुन् जुन तपाईले इटालीको समुद्री किनारमा मात्र पाउनुहुनेछ, फ्रान्स, र इ England्ल्याण्ड.
1. इटालीको सुन्दर तटीय शहर: अमाल्फी तट
अमाल्फी शहरको टायर्रानियन समुद्री सतहमा अवस्थित प्रसिद्ध रमणीय घरहरू पोस्टकार्ड उत्तम छ. त्यसैले, Amalfi सबै Amalfi तट शहरहरु मा इटाली को सबै भन्दा सुन्दर तटीय शहर को रूप मा माथि छ. साथै, तपाईंले पाउनुहुनेछ कि यो युरोपमा सब भन्दा काल्पनिक गर्मी गन्तव्य हो. यो चट्टानहरू बिरूद्ध निलो पानीलाई धन्यवाद छ, र र colorful्गीन घरहरू जसले समुद्री छेउमा एस्केडको लागि उत्तम सेटि create सिर्जना गर्दछ.
यसबाहेक, यदि तपाई अधिक खोज्न चाहानुहुन्छ भने, त्यसो भए अमाल्फी क्याथेड्रल र विला रुफोलो, भूमध्य सागर र बगैचाको शानदार दृश्य प्रस्ताव गर्नुहोस्. तथापि, Amalfi को हाईलाइट हो 40 मिनेट’ भियट्री सुल मारे बाट पोशिटोनो केही ड्राइभको साथ सबै भन्दा राम्रो विचारहरू तटको.
2. फ्रान्स मा सबै मनमोहक तटीय शहर: सेन्ट-मालो
जबकि सेन्ट-ट्रोपेज र नाइस छन्2फ्रान्स मा लोकप्रिय तटीय शहरहरु को, अंग्रेजी च्यानलमा ब्रिटनीमा सेन्ट-मालो एक समुद्री तट हो लुकेका मणि. यो सेन्ट-मालोको किनारमा सम्पन्न भएका समृद्ध इतिहास र कथाहरूको लागि धन्यवाद हो. सेन्ट-मालोमा, तपाईं समुद्री डाकुहरूको समयहरूमा फेरि यात्रा गर्नुहुनेछ, र फ्रेन्च corsairs, लडाई र ramparts देखि ग्रान्ड फ्रान्स बचाउन.
आज, सेन्ट-मालोको रैम्पार्टहरू पुरानो शहरको वरिपरि पैदल यात्राको लागि उत्कृष्ट छ, admiring the sunset, र छालहरू हेर्दै. सेन्ट-मालोको आकर्षणको पूर्ण मूल्यांकन गर्नका लागि तपाई राति बस्नु पर्छ र ग्रान्ड बी र पेटिट बी किल्लाहरूको टापुहरूको भ्रमण गर्नुपर्दछ।.
3. युरोपमा सुन्दर तटीय शहर: Lerici, इटाली
धेरैले इटालियन रिभिएराको लेरिसी शहरको बारेमा सुनेका छैनन्, युरोपमा सब भन्दा सुन्दर तटीय शहरहरू मध्ये एक. यसको छिमेकी ला Spezia पोर्ट शहर शुरुवात बिन्दु हुन सक्छ Cinque Terre मा तपाइँको यात्रा, तर लेरिकीको आफ्नै अन्वेस गरिएको जादू छ. तपाईंले Lerici पाउनुहुनेछ 8 La Spezia को दक्षिण पूर्व, चित्रित घरहरूको साथ, लोभ, एउटा पोर्ट, समुद्रलाई हेरेर १२ शताब्दीको महल, अचम्मको दृष्टिकोण, र पैदल यात्रा ट्रेल्स तटमा.
यसबाहेक, Lerici तपाईको इटालियन तटमा यात्रा को लागी एक अद्भुत आधार बिन्दु हो: सुरम्य Cinque टेरे, Portofino, र Portoverane. तपाईं पनि राम्रो Pisa गर्न एक दिन यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ.
4. फ्रान्स मा सुन्दर तटीय शहर: क्यासिस-मार्सिले
चूनढुंगा चट्टानहरू, मूल पानी सफा गर्नुहोस्, फुटपाथ क्याफेबाट समुद्री तटको दृश्यहरू, क्यासिसलाई सबैभन्दा मनमोहक तटीय शहर बनाउनुहोस्. क्यासिस युरोपको सब भन्दा अग्लो तटीय चट्टान बीचमा अवस्थित छ, क्याप Canaille, र सेतो चूना पत्थर Calanques. यसबाहेक, क्यासिसमा, तपाईं सबै संसारको सबै भन्दा राम्रो पाउनुहुनेछ – प्रोभेन्स दाखबारी, र भव्य भूमध्यसागर.
गुलाब रक्सीको गिलासमा सिपि।, मछुवाहरू हेर्दै, यो जादुई तटीय शहरमा तपाईंको छुट्टीको मुख्य आकर्षण हुनेछ. यो फ्रान्सेली हिडन मणि मार्सिलेदेखि टाढाको सवारी हो, र व्यस्त शहर बाट सही getaway.
पेरिस गर्न ला रोशेल एक ट्रेन संग
5. फ्रान्स मा Arromanches-Les-Bains
नोर्मान्डीको अवतरणको लागि प्रसिद्ध, एरोमेन्च फ्रान्सको नोर्मान्डी क्षेत्रको एक सुन्दर तटीय शहर हो. सैन्य बिन्दुको विपरित यो एक पटक थियो, आज तपाईंले अटलान्टिक तटमा एक अद्भुत समुद्र तट शहर भेट्टाउनुहुनेछ.
त्यसैले, तपाईं सागरबाट अविस्मरणीय छुट्टीको लागि हुनुहुन्छ, स्कूबा डाइभि withको साथ, नौकायन, गोल्डन बीच मा घोडा सवारी, र सूर्य स्नान. छोटो वा लामो सप्ताहन्तको लागि, तपाइँ एरोमेन्च-लेस-बैन्सको साथ सागरको आनन्द लिनुहुनेछ’ 550 बासिन्दाहरू, र अनुभव नोर्मान्डी जादू.
6. कर्नवाल, इङ्गल्याण्ड
कर्निस तटरेखा विस्तार गर्न को लागी 679 किलोमिटर चट्टानहरु, गुफाहरू, र समुद्र तट. यो कर्केवल को स्थिति लाई युके मा सबै भन्दा राम्रो सर्फिंग शहर को रूप मा जोड्छ. त्यसैले, यदि तपाईं समुद्री किनारमा तपाईंको छुट्टीमा पानी खेल गतिविधिहरू थप्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, कर्नेलवाल उत्तम छ.
ग्रेट ब्रिटेनमा सबैभन्दा सुन्दर तटीय शहर एक सुन्दर प्रायद्वीप हो. त्यसैले, तपाईं जहाँ पट्टि फर्कनुहुन्छ, तपाईं आफूलाई आश्चर्यजनक तटवर्तीमा उभिएको पाउनुहुनेछ. कर्नेलवालको उत्तम तटहरू र तटवर्ती रेखाका उत्तम दृश्यहरूका लागि, तपाईं दक्षिण पश्चिम तट मार्ग हिंड्न सक्नुहुन्छ.
7. फ्रान्स मा होनफ्लर कोस्टल टाउन
यदि तपाइँ फ्रान्सको सर्वश्रेष्ठ तटीय शहर खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसोभए होनफ्लुर भनेको उत्तर हो. Seine नदी र सागर को बैठक बिंदु मा, नदी परिभ्रमण, रंगीन घरहरू समुद्रमा प्रतिबिम्बित, र किनारमा हिंडे, Honfleur लाई एक बनाउनुहोस् 10 युरोपमा सबैभन्दा सुन्दर तटीय शहरहरू.
अक्टुबर होनफ्लूरको मरीना र समुद्री किनारको ताजा हावामा जान र आनन्द लिनको लागि उत्तम समय हो. गर्मीलाई बिदाइ दिन र सूर्यलाई भिजाउन र आर्द्रताबाट बच्न यो उत्तम तरिका हो, र पर्यटकहरूको भीड.
एउटा ट्रेनको साथ पेरिसको लागि रौंन
पेरिस एक ट्रेन संग Calais
एउटा ट्रेनको साथ कैलाइसको लागि रौंन
8. सान्ता सेजेरिया टर्मि इटाली
सान्ता Cesarea Terme Puglia मा एक अद्भुत तटीय शहर हो. समुद्रलाई हेरेर, तपाईं राम्रो समुद्री र मजा लिनुहुनेछ तपाईको इटालियन बिदामा थर्मल नुहाउने ठाउँ.
इटालीका अन्य र colorful्गीन समुद्री तटहरूको विपरीत, सान्ता सेजेरिया यसको द्वारा छुट्याइएको छ इस्लामी वास्तुकला. यसको अर्थ, सेतो प्रभावशाली विला र टावरहरू शहर वरिपरि, र क्षितिजको नीलो समुद्रको साथ एकदम राम्रो देखिन्छ. यदि तपाईं यस भव्य तटवर्ती शहरको भ्रमण गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईं शहर मा धेरै रूपान्तरण महल-होटल मध्ये एक मा रहन पर्याप्त भाग्यशाली हुन सक्छ.
रेलको साथ बारीमा नेपल्स
एक ट्रेन संग फासीनो बारी
रेलको साथ फासानोमा नेपल्स
9. Bruge (प्रयोग), बेल्जियम
पुरानो शहर ब्रुग सबैभन्दा धेरै मध्ये एक हो युरोप मा आकर्षक पुरानो शहर केन्द्रहरु. ब्रुगले पनि एउटाको रूपमा शीर्षक राख्दछ 10 युरोपमा सबैभन्दा सुन्दर तटीय शहरहरू. समुद्री किनारमा आँखाहरूका लागि अचम्मका दृश्यहरू छन्, यसको नहरहरु संग, डु boats्गा, र सुरम्य घरहरू.
एक सुन्दर तटरेखा संग, धेरै फ्लेमिस राजाहरू छान्नु यो आश्चर्यजनक कुरा होइन, Bruge आफ्नो घर को रूप मा. त्यसैले, तपाईं समुद्री सतह हेरेर महल र टावरहरूको स number्ख्याको लागि तयार हुनुपर्छ.
10. भेनिस, इटाली
भेनिसको भव्य शहर हाम्रो बन्द गर्दछ 10 युरोप सूचीमा सबै भन्दा सुन्दर समुद्री तट. वास्तुकला, gelato, र डुङ्गा सवारी भेनिसलाई समुद्रले निरपेक्ष काल्पनिक गन्तव्य बनाउनुहोस्.
भेनिस समुद्रमा बस्दछन्, र यसैले यो सबै यूरोप मा अन्तिम तट शहर. इटालीवासी भेनिस मन पराउछन्, र पर्यटकहरु पनि यो प्रेम गर्छन्. गल्ली र साँघुरो सडकको वरिपरि तपाईंसँग अद्भुत समयहरू छन्.
यहाँ मा एक ट्रेन सेव, हामी तपाईको यात्राको योजनालाई "युरोपमा १० अति सुन्दर तटीय शहरहरू" सहयोग गर्न खुशी छौं।.
के तपाईं हाम्रो ब्लग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ “युरोपमा १० अति सुन्दर तटीय शहरहरू” तपाईंको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbeautiful-coastal-towns-europe%2F%3Flang%3Dne اور- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
beautifulcoastaltownitaly beautifulcoastaltownseurope CoastalTowns फ्रान्सेभिएरा Italianriviera travelengland
ट्रेन यात्रा, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा डेनमार्क, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्कटल्याण्ड, ट्रेन यात्रा स्पेन, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप